Kaddib guuldarradii xalay ka soo gaartay Southampton Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp oo weerar ku qaaday kooxda Man United – Gool FM
Kaddib guuldarradii xalay ka soo gaartay Southampton Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp oo weerar ku qaaday kooxda Man United
Haaruun January 5, 2021
(Liverpool) 05 Jan 2021. Hoggaamiyaha Kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa weerar ku qaaday naadiga Manchester United kaddib guuldarradii ay kala kulmeen xalay Southampton kulankii ka dhacay garoonka St Mary.
Kooxda Reds waxaa xalay looga adkaaday hal gool oo uu bilowgii ciyaarta ka dhaliyey weeraryahankoodii hore ee Danny Ings kaddib markii uu dhammaystiray karoos uu soo qaaday Ward-Prowse, waxaana kooxda macallin Klopp la baray cashar difaacasho ah.
Waxa uu hoggaamiyaha reer Jarmal ee kooxda Liverpool, Klopp soo bandhigay dareenkiisa ku aaddan caro uu u qabo garsoorihii kulankaas dhex-dhexaadinayey ee Andre Marriner oo isagu aan kooxdiisa u dhigin labo gool ku laad oo uu aamisan yahay macallinka Reds inay mudnaayeen in lagu abaal-mariyo.
Waxaana Macallin Klopp uu si dadban u weeraray kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United isagoo sheegay inay yihiin kuwo helay rigoorayaasha ugu badan muddo labo sano ah gudahood, taasoo xitaa ka badan inta gool ku laad ee ay heshay kooxdiisa shan sano iyo bar uu joogay garoonka Anfield.
“Manchester United labo sabo gudaheed waxa ay ku heshay rigooreyaal ka badan shan sano iyo bar aan joogay Liverpool, laakiin taasi marmarsiiyo uma noqonayso bandhiggeena caawa, ma’aanan ahayn kuwo in ku filan wanaagsan” ayuu macallinka reer Jarmal u sheegay Sky Sports.
“Muxuu Andre Marriner ku sameeyey Sadio Mane, ma hubo inay middaas tahay caadi, waxay ahayd in rigoore loo dhigo, waxaana jiray sidoo kale mar ay kubaddu gacanta ku dhacday, anigu wax fikrad ah kama haysto
“Taasi marmarsiyo uma ahan qaab ciyaareedkeena laakiin dhibic ayaad heli kartaa haddii rigoore laguu dhigo, hadda waa inaan muujinno fal-celin” ayuu hadalkiisa ku daray macallin Klopp.
Kooxda Manchester United ayaa hoggaanka horyaalka Premier League kala wareegi doonta Liverpool haddii ay ka fogaadaan guuldarro ka soo gaartay Burneley isbuuca soo socda.
Manchester City oo kor kala socota wadahadallada heshiis kordhinta Sergio Ramos ee kooxda Real Madrid… (Miyey keeni doontaa Etihad?)
Miyuu kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos kula biiri doonaa Lionel Messi Kooxda Paris Saint-Germain??